Akụkọ - 2020 Wenzhou Golden Eagle Pump valve Exhibition Exhibition / International Pump valve Exhibition Exhibition / Zute gị na Oubei yongjia na October 23
Ihe Wenzhou nke 15 (Golden Eagle) Ngosiputa mgbapụta / valvụ Ngosiputa / mgbapụta mgbapụta Ngosiputa / International mgbapụta valvụ Ngosi / ụlọ ọrụ mgbapụta / onye na-emepụta ngwaahịa valvụ / ga-eme na Wenzhou Yongjia Oubei Culture and Sports Square site na October 23-25, 2020!
15th Wenzhou (Golden Eagle) mgbapụta valvụ Ngosiputa emezila na usoro nke ogo, oru na ihe ndi ozo, ya na ulo ntu 650 na ebe ngosi ngosi nke square square 20,000. Nọgide na-ewusi ndị ọkachamara na-ege ntị n'ụlọ na Germany, ,tali, Korea, Singapore, India, Vietnam na ndị ọzọ na-azụ ahịa si mba ofesi hazie ịkpọ òkù, a ga-akpọkwa ndị otu ụlọ ọrụ na-ejedebe ọrụ ngosi ngosipụta nke mgbapụta mgbapụta, ọkpọkọ ọkpọkọ, dịka teknụzụ kachasị ọhụrụ. na ngwaahịa, ubi maka ụlọ ọrụ mgbapụta mgbapụta iji nye ngwaahịa dị mma, teknụzụ kachasị ọhụrụ na ngwọta.
PVPEW 15th Wenzhou (Golden Eagle) mgbapụta valve mgbapụta bụ ngosipụta nke ụlọ mgbapụta nke ndị ọrụ ụlọ, abụrụla ihe omume ọkachamara nke ndị ọkachamara n'ụlọ na mba ndị ọzọ agaghị echefu.
Ebe ọ bụ na wenzhou Jinying Media Co., LTD. Emere ihe ngosi mgbapụta ọkachamara na 2004, mmetụta ya nọ na-agbasawanye na ogo ya na-agbasawanye, ọ ghọwokwa otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ. Ngosipụta a gosipụtara nke ọma ụlọ ọrụ mgbapụta na ụlọ ọrụ valvụ nke China, ọkachasị “obodo amụrụ China na valve”; Ọzọkwa welie ọhụhụ na mmetụta nke Wenzhou mgbapụta na valvụ ụlọ ọrụ n'ụlọ na mba ọzọ; Ewebata mba ọzọ elu talent, technology, management na ego iji kwalite na ịgbanwe omenala ọrụ, na-akwalite njikarịcha na upgrading nke ulo oru usoro, na n'ihu welie asọmpi nke ụlọ ọrụ; Ọzọkwa abawanye wenzhou mgbapụta valvụ ụlọ ọrụ mba ọzọ ahia ahịa, dịkwuo mba ọzọ mgbanwe ego; Ọ bụ nnukwu akụkọ ihe mere eme na ihe bara uru iji kwalite ọganihu na-aga n'ihu, ngwa ngwa na ahụike nke Yongjia, Wenzhou na ụlọ ọrụ mgbapụta na ụlọ ọrụ China.
Mgbe afọ nke mmepe, Wenzhou mgbapụta na valvụ ụlọ ọrụ ugbu a nwere ihe karịrị 3,110 ụlọ ọrụ, gụnyere 523 ụlọ ọrụ na-enwe kwa afọ mmepụta uru nke ihe karịrị 20 nde yuan. Enwere ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu dị iche iche nke 77 dị iche iche. Ulo oru agglomeration ulo oru di otutu na Oubei, Longwan na Ruian. Na 2019, ngụkọta mmepụta mmepụta nke ụlọ ọrụ dum ruru ihe karịrị ijeri yuan 45, yana uto kwa afọ nke 9%.